Dowladda Kenya oo iibineysa diyaarado ay lahaayeen ciidamada xoogga Soomaaliya iyo labo kale oo ay laheyd Shirkadda Diyaaradaha ee Jubba Airways. | Dayniile.com
Home Warkii Dowladda Kenya oo iibineysa diyaarado ay lahaayeen ciidamada xoogga Soomaaliya iyo labo...
Dowladda Kenya oo iibineysa diyaarado ay lahaayeen ciidamada xoogga Soomaaliya iyo labo kale oo ay laheyd Shirkadda Diyaaradaha ee Jubba Airways.
Dowladda Kenya ayaa qiimo yaab leh ku iibineysa diyaarado ay lahaayeen ciidamada xoogga Soomaaliya iyo labo kale oo ay laheyd Shirkadda Diyaaradaha ee Jubba Airways.
Previous articleXildhibaan Xuseen Carab Xiise “ Malxiisadii la tartamaysay mahdi guuleed waa ay diiday in sawir laga qaado magaceedana ay sheegto.
Next articleBaraha bulshada Turkiga waxaa si weyn ugu faafay qoraal ku saabsan in uu “dhintay” madaxweynaha dalkaas Recep Tayyip Erdoğan.
Guddoomiyihii hore ee baarlamanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa sanado badan kadib wajahaya inuu waayo kursigiisa xildhibaannimo oo isbaaro siyaasadeed loo dhigtay. Xog aan helnay...
Gaashaanle dhexe Abiy Ahmed oo sheegay in uu guulo ka gaaray...